တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တရုတ်နိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ် ထားသည့် မူဝါဒ(၆)ရပ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များအား နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင်တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံရပ် တည်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေ များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းကျယ်ပြန့်စွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အားလကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွား ရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E. Mr. Sun Guoxiang အား ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာတရုတျနိုငျငံသံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြား၌ တရုတျနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျ ပေးနမှေု အခွအေနမြေား၊ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ ခမြှတျ ထားသညျ့ မူဝါဒ(၆)ရပျအတိုငျး ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အစိုးရနှငျ့ တပျမတျော၏ဆောငျရှကျခကျြမြားအား နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျတရုတျနိုငျငံက ထောကျခံရပျ တညျဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျ အေးခမျြးမှုကိုဆောငျရှကျပွီး နှဈနိုငျငံ နှငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမိုတိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနေ မြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးကယျြပွနျ့စှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဌာန၏ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွ ကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။